दक्षिण कोरिया गणतन्त्रात्मक देश हो । यसको राजधानी सोल हो । कोरियाको अरु प्रमुख शहरहरु बुसान, इन्चोन, डाइजोन, ग्वाँङजु हो । मुख्य भाषा कोरियन हो । कोरियाको मुद्रालाई वन भनिन्छ । सय वन बरावर झण्डै ९ रुपैयाँ १९ पैसा हुन्छ । यो विनिमय दर अमेरिकी डलरको भाउको उतारचढावसँगै तलमाथि हुने गर्छ । दक्षिण कोरियामा बौद्ध र क्रिश्चियन धर्म मान्नेहरुको बाहुल्यता छ।
कोरियामा जाडो मौसम चिसो र सुख्खा हुन्छ । गर्मीमा भने ओसिलो र तातो हुन्छ । नेपालले इपिएस प्रणाली अन्तर्गगत रोजगारीको लागि सन् २००८ देखि नेपाली कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो । इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार सम्झौता हुनुअघि आफ्नै तरिकाले झण्डै १ हजार कामदार कोरिया गएका थिए ।
कोरियामा अहिले झण्डै ६० हजार नेपाली कामदार छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत नेपाली युवा औद्यागिक क्षेत्रमा काम गर्छन । २० प्रतिशत युवा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्छन ।रोजगारीका लागि कोरिया जान कोरियन भाषा जान्न जरुरी छ । त्यसैले नेपाल सरकारले लिने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेले मात्रै कोरियामा रोजगारी पाउँछन् । भाषासँगै सिप पनि सिक्न जरुरी छ । भाषा परीक्षा र सिप वापत एचआरडी कोरियाले तोकेको न्यूनतम शुल्क तिनुपर्छ ।रोजगारीका लागि कोरिया पुगे पछि युवाले चार वर्ष १० महिना काम गर्न पाउँछन् । भाषा परीक्षा पास गर्ने सबै युवा कोरिया जान पाउँदैनन । किनभने भाषा परीक्षामा कोरियाले माग गरेको कामदारको संख्या भन्दा निक्कै बढी पास हुन्छन ।
दक्षिण कोरियामा नेपालको दूतावास राजधानी सोलमा छ ।कुनै समस्या परेमा सोलस्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरे सल्लाह र सहयोग पाइन्छ ।37-24, Sungbuk-dong, Sungbuk-gu, Seoul:-Tel. No. 0082 (02) 37899770/1,Fax No. 0082 (02)7368848:Email:seoul@mofa.gov.np,nepembseoul@yahoo.com,Website:nepembseoul.gov.np,www.www.nepembseoul.or.kr
न्यूनतम तलव ज्याला नदिएमा वा ढिला गरेमा, आप्रवासन र प्रवास सम्बन्धी समस्या परेमा, रोजगार परमिट प्रणाली विषयमा, औद्योगिक दुर्घटना भएमा, अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा, मृत्यु र कर्मकाण्ड, ठगी, आक्रमण, नागरिक मुद्दा साथै अन्य समस्या राख्न सकिन्छ । सेवा फिर्ता कल – सेवा कल फिर्ताको लागि आफ्नो फोन नम्बर छोड्न नभुल्नुहोला।फोन गर्ने समयावधि:-सोमवार – शुक्रवार बिहान ९:०० – बेलुका ६:००,आइतवार दिउसो १:०० – बेलुका ७:००,लन्च समय दिउसो १२:०० –१:०० बजे सम्म:-शनिवार र आधिकारिक बिदाहरुको दिन केन्द्र बन्द रहनेछ ।
कोरियनले पेट ठुलो भयो भनेर हैरान पारेको छ? अपनाउनुस यि अचुक उपाएहरु !
विश्वासको भरमा ४% ब्याजदरले ऋण दिनुहोस् : म ऋणपनि तिर्छु नेपालपनि बनाउँछु -महावीर पुन